Myanmar News Plus - Page 763 of 1604 - ခေတ်လူငယ်တို့ မီဒီယာ ...
ကိုယ့်မျက်စိရှေ့မှာ ဓာတ်လိုက်နေတဲ့သူကိုတွေ့ရင် ဒီအချက်တွေကို ပြုလုပ်ပေးပါ…(ဖတ်ပြီးရှယ်ပေးပါနော်)
ကိုယ့်မျက်စိရှေ့မှာ ဓာတ်လိုက်နေတဲ့သူကိုတွေ့ရင် ဒီအချက်တွေကို ပြုလုပ်ပေးပါ….!(ဖတ်ပြီးရှယ်ပေးပါနော်)
ဓာတ်လိုက်လို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့လျှင် ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းသို့ အမြန်ဆုံးသွားရပါမယ်။
စိတ်မကောင်းစရာ အဖြစ်အပျက်ပါ မျက်ရည်လွယ်သူများမဖတ်ပါနဲ့ ကျော်သွားလိုက်ပါ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လှိုင်သာယာမီးခွက်ဈေးမှာ 7. ညနေ 7:00 လောက်က ဖြစ်ခဲ့တာပါ ရန်ကုန်တက်ပြီး အညာစော င်လေးတွေရောင်း သမာအာဇီဝအလုပ်နဲ့ ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လုပ်ပြီး အညာမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ မိဘတွေကို ထောက် ပံ့နေတဲ့ ပခန်းကြီးနယ်သားလေး မောင်လူအေးကို လူလိမ်သူခိုးဆိုပြီး လှိုင်သာယာက မိကြည်ဝေဆိုတဲ့ မိန်းမဦးဆောင်တဲ့ လူလိမ်တစ်ဖွဲ့က ဝိုင်းရိုက်ပြီး ငွေလုသွားတဲ့ ကိစ္စပါ။
အာရှတော်ဝင်တွင် ကျောက်ချေဖျက်ရာမှ လူနာသေဆုံးခဲ့မှု သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ကြီးက သေဆုံးသူ၏ မိသားစုကို တောင်းပန်
သေဆုံးရတဲ့ အကြောင်းရင်းမေးရင်တောင် မပြောပြတတ်ဘူး။ ရောဂါက ခြောက်မျိုးလောက်ဖြစ်နေတယ်။
ဒီရောဂါတွေ တကယ်လို့ ရှိရိုးမှန်ရင် ခွဲစိတ်မှု လုပ်သင့်မသင့် သူတို့ ဆုံးဖြတ်ရမှာလေ။ သေတော့မှ ရောဂါတွေအများကြီး ဘာကြောင့်ထဖြစ်ရတာလဲ…
မလှတော့လဲ ကိစ္စမရှိပါဘူလို့ပြော လိုက်တဲ့ အကယ်ဒမီ နန္ဒာလှိုင်
အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ အလှမ်းဝေးသွားပေမယ့် ယခုထက်ထိ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်ကို ရရှိထားနိုင်သူ သရုပ်ဆောင် နန္ဒာလှိုင်က ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ ဝိတ်ချနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူမကို အရမ်းပိန်သွားလို့ ပရိသတ်တွေက စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြပါတယ်။
ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကို မျက်ရည်ကျစေခဲ့တဲ့ သတင်းတစ်ခု
ကြားသိရသူတိုင်း မျက်ရည်မဆယ်နိုင်တဲ့ ရင်နင့်ဖွယ် ဖြစ်ရပ်မှန် သတင်းတစ်ခု
အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံ ဗွီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ရန်>>>
၁၉၈၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်မှာ ကိုလံဘီယာမှာရှိတဲ့ နီဗာဒို ဒယ်လ်ရဇ် (Nevado del Ruiz ) မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တော့ ကျောက်ရည်ချော်ပူရည်တွေဟာ ရွာပေါင်း ၁၃ ရွာနဲ့ လူ အသ
မျက်ရည်များရဲ့ နောက်ကွယ် … 😁(အကို့ ဆေးရုံကြီး တစ်ချက် သွားချင်လို့ ဘယ်လောက် ပေးရမလဲ ?)
အကို့ ဆေးရုံကြီး တစ်ချက် သွားချင်လို့ ဘယ်လောက် ပေးရမလဲ ?
၃၅၀၀ ပါ ခဗျ
ဝေဖန်နေကြတဲ့ ပွဲတက်ဖက်ရှင်အပေါ် ပြန်လည်ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ဖွေးဖွေး
သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေးက ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ ပွဲတက် ဂါဝန်လှလှလေးက ကမ္ဘာကျော်အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Dua Lipa ရဲ့ ဖက်ရှင်နဲ့ ထပ်တူကျခဲ့တဲ့ အပေါ် သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်ပေ့ခ်ျရဲ့ Comment ကနေတဆင့် ပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။